Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ireo vehivavy miisa telo nahavanon-doza, nanapoizina zazakely tamin’ny sakafo. 28 janvier 2021
Nanatona ny manam-pahefana noho izany izy ireo nilaza fa misy olona tsy mifankahazo aminy ny fianakaviana ary mety ahiany ho namosavy io zaza io. Vokany, nanokatra famotorana lalina teny anivon’ny fiarahamonina ny Polisy nandray an-tanàna ny raharaha ka ramatoa miisa 03 izay 62 sy 52 ary 39 taona teo an-tanàna ihany no nanome poizina ilay zaza. Tao anatin’ny fanadihadiana no nitsotra ireto Ramatoa voasambotry ny Polisy ireto fa nomen’izy ireo bisky nisy poizina ity zaza tsy manan-tsiny. Etsy ankilany dia fantatra ihany koa fa tsy io zaza io irery ihany no nanaovan’izy ireo ny asa ratsiny fa misy ireo olona hafa nataon’izy ireto nitondra takaitra, ka tao ny lasa malemy ary nisy ihany koa ny namoy ny ainy.